Kobcinta Garaadka Siyaasadeed Ee Ardaydii La shaqaaleeyay - Cakaara News
Kobcinta Garaadka Siyaasadeed Ee Ardaydii La shaqaaleeyay
Jigjiga(CN) Arbaco 27 January 2016, Tababar uu soo agaasimay Xafiiska Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha isla markaana loo hayay ardaydii lagu shaqaalaysiiyay deegaanka qaybihiisa kaladuwan ayaa ka bilowday hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdule Xasan.
Tababarkan oo loo hayay arday tiradoodu dhantahay 2000 kun ayaa waxaa la siinayay cashiro ay kamid yihiin barnaamijka Adeeg bixinta Dowlada, nidaamka Xisaabaadka iyo kharash bixinta shuruucaha shaqaalaha, & saraynta sharciga, waxaana cashirada bixinayay agaasimo iyo khabiiro heer deegaan ah oo ka socday kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Tababarkan furitaankiisii ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI Mudane Mowliid Haayir Xasan oo sheegay in tababarkan ujeedadiisu yahay mid larabo in kor loogu qaado garaadka siyaasadeed ee ardaydan cusub ee hada la shaqaalaysiiyay islamarkaana lagula qabadsiiyo siyaasadaha adeegbixinta ee shaqada iyo shaqaalaha. Sidookale waxa uu masuulku kula dardaarmay ardayda la tababarayo in si fiican ay casharada ay uga faa iidaystaan.
Ugu danabayna waxa uu masuulku hadalkiisii ku gaba gabeeyeey in qof kasta oo tababarkan qaatay uu ku muujiyo shaqada islamarkaana ugu shaqeeyo bulshada si daacada oo wadaniyad leh.